maamulka magalada dhase ayaa sheegay in u awoodi kari waayay in u kaalmo gaadhsiiyo soo baro kacayaasha - ዜና ከምንጩ
maamulka magalada dhase ayaa sheegay in u awoodi kari waayay in u kaalmo gaadhsiiyo soo baro kacayaasha
magalada dhase oo 400 oo kiilo mitr u jirta magalada addis ababa maamulkeeda ayaa wargayska addis maleda u sheegay in soo barokacayaasha soo galaya magaalada dhase ay soo badanayaan oo u awwodi kari waayay in u ufidiyo adeega gargaarka bini aadamnimo.
Misaaye Khadiir oo ah madaxa xidhiidhka arimaha dawlada ee maamulka magalada dhase ayaa wargayska u sheegay in kasta oo laan qayrta cas iyo xafiiska kahortaga masiibooyinka iyo damaanada cuntaduba ay u fiidiyeen kaalmo biniaadamnimo, hadana ay maalinba maalinta ka danbaysa ay soo badanayaan soo baro kacayaashu adeegi loo fidinayayna waxa u noqday mid aan ku filnaayn dadkaasi.
waxa u tilmaamay in soo baro kacayaasha soo galaya magaalada loo baahanyahay in sii joogto ah wax loo siiyo. in kasta oo dhinaca dawlada mudo yar kaalmo laga siiyay hadana xiligan xaadirka ah waxa ka muuqata halkaasi in la iska ilaaway oo caawimadi ay yaraatay, sidaas darteedna in aan wax gaadhsiino soo baro kacayaasha ayaa dhibaato nagu noqotay. kaalmada uga imanaysa dhinaca bulshada mooye dhinaca dawlada haba yaraate in aan laga siinin caawimo joogto ah ayaa nagu noqotay caqabad.
waxa u masuulku kale oo u xusay in ay isasoo tarayso daganaanshaha magaaladu hadana maadaama ay soo badanayaan dadka soo baro kacay waxa magaladaasi lagu soo rogay xaalad dagdag ah.
sidaas darteedna dhaqdhaqaaqa tagaasida iyo shacabkaba waxa laga dhigay in la joojiyo 8da fiidnimo halka baajaajyaduna ay joogsadaan 6da makhribnimo.
waxa kale oo la sheegay in laga bilaabo 4ti bisha nahaase ee 2013ka la dhqan galiyay xalada dagdaga ah waxana ay soconaysa inta ay yaraanayso tirada dadka soo baro kacayaasha ah.
waxa kale oo u yidhi intii sharcigan xaalada dagdaga ah la dhaqan galiyay dadka soo baro kacayaasha ah ee magaalada soo galaya in tiradoodu ay soo badanayso oo maalinti walba 200 oo qof dad gaadhaya ay magaalda ka soo galaan meelo kala duwan, sidaas darteedna soo baro kacayaasha halkaasi ku sugan ay yihiin 300 oo kun oo qof in ka badan.
waxa kale oo u sheegay in soo baro kacayaasha soo galaya magaalada dhase ay yihiin kuwii ka soo baro kacay meelihi ay soo weerareen kooxda argagaxisada lagu magacaabay ee tplfta,sida wuqooyiga walo iyo deegaanka canfarta ay yihiin, sidaas drteedna ay yihiin dadkii ku noola dagmada wuqooyiga walo dadkii ku noola oo dhan, deegaanka canfartana hal dagmo dadkii ku noola oo dhan iyo qaar meelo kale ka soo kala qaxay oo magaalada soo wada galay.
waxa u hadalkiisi raaciyay masuulku in magaalada dhase ay baro kacayaashu ku jireen shan xerooyin. isniinti la soo dhaafayna sagaal xeryo ah looga dhigay, kuwa xeryaha ku jira mooye ay jiraanna qaar soo baro kacayaal ah oo guryo kiraystay iyo qaar eheladooda ku dagay.
waxa kale oo u sheegay in dadka ku sugan xeryaha ay bulshada magaalada ku nooli u fidiyaan kaalmo biniaadamnimo oo ay siiyaan waxyaabaha daruuriga ah sida cuntada iyo dharka oo ay garabna siyeen, goobah caafimaad ee ka jira magaaladana ay u fidiyaan adeeg cafimaad, sida oo kale cidii ku caawin karaysay lacagtana ay lacago ku caawiyaan soo baro kacayaasha.
sida u sheegayna Misaaye in dadka magaaladu ay is kaashadeen si ay amaanka magalada u sugaan oo ay ilaaliyeen amnigi magaalada iyo agagaarkoodaba.
waxa kale oo la sheegay in dhalinyaro ku hawlan tabarucaad iyo nabad sugidu ay is kaashadeen si ay cidi magaalada si sharci daro ah u soo galaysana magaaladana uga ilaaliyaan si aanay u soo galin hawsheeda ay ku jiraan.
is bahaysigaasina ay ku adkeeyen amnigi meelaha magaalada lago soo galo.
waxa kale oo u hadalkiisa ku cadeeyay in wararka sheegaya in ay kooxda argagaxisda ah ee tplftu ay qabsadeen meelaha qaar ay tahay xog been abuur ah. in ay jiraanna dad gaar ah oo wararka noocaasi ah sii daynaya oo bulshada jah wareeriyay oo cabsina ku abuuray.
waxa xusid mudan in hada ka hor u wargayska addis maleda u ka waramay in dadka ka soo baro kacay dagmada wuqooyiga walo ee soo galay magalada dhase iyo magalada kombolja ay ku dhiban yihiin waxyaabaha daruuriga ah ee sida maceeshada iyo hooyga.
Total views : 7504985